रोनाल्डोलाई उछिन्दै मेस्सी बने विश्वकै सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने फुटबलर – Medianp
रोनाल्डोलाई उछिन्दै मेस्सी बने विश्वकै सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने फुटबलर
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २७, २०७५१३:१६0
काठमाडौँ । विश्वकै चर्चित फुटबलर रोनाल्डोलाई जित्दै स्पेनिस फुटबल क्लव बार्सिलोनाबाट खेल्ने अर्जेन्टिनाका फुटबलर लियोनेल मेस्सी विश्वकै सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने फुटबलर बनेका छन् ।
मेस्सीले क्रिष्टियानो रोनाल्डो, फ्रान्सका एन्टोइन ग्रिजम्यान र ब्राजिलमा नेयमारलाई दोब्बरले जितेका छन् । मेस्सीले एक महिनामा ८३ लाख युरो अर्थात नेपाली १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लिने गरेका छन् । युभेन्टसको लागि खेल्ने रोनाल्डोको मासिक पारिश्रमिक ४७ लाख युरो नेपाली रुपौयाँ ६० लाख पाउँछन् ।
गत वर्ष भएको विश्वकपको उपाधी जित्ने टिम फ्रान्सका खेलाडी ग्रिजम्यान विश्वको सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक पाउनेको तेस्रो सूचिमा परेका छन् । उनले ३३ लाख युरो अर्थात नेपाली रुपैयाँ ४२ करोड लिने गरेका छन् । यो सूचिको चौँथो र पाँचौँ स्थानमा नेयमार र लुइस सुआरेज रहेका छन् ।
ब्राजिलियन स्टार नेयमारले एक महिनामा ३०.६ लाख युरो पारिश्रमिक पाउँछन् । उरुग्वेका अर्का स्टार सुआरेजले २९ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । बार्सिलोनाको लागि विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी जनाइरहेका मेस्सीले विभिन्न स्थानमा भएको प्रतियोगितामा शानदार प्रर्दशन गर्दै स्पेनिस लिगमा ४ सय भन्दा बढी गोल गरिसकेका छन् ।
पर्वतका छ स्थानीय तह दमकल विहीन
फ्लप फिल्मबाट डेव्यु गरेर साउथ फिल्ममा सुरपरस्टार बनेका यी ६ नायिका
च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनल समिकरण पुरा, कसको भिडन्त को सँग ?
स्पेनिस पत्रिकाको दावीः रियल मड्रिडको सपना नेयमार
के अयाक्सले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ला ?
सन्दीपले तीन विकेट लिएको खेलमा दिल्लीद्वारा पञ्जाब पराजित
ब्राजिलका डानी आल्भेस बने सबैभन्दा सफल फुटबलर, जिते ४२ औं उपाधि
म्यानचेस्टर युनाइटेड जाँदै बेल, मूल्य पाँच मिलियन मात्रै !
के बालोन डि’ओर मेस्सीले जित्दैछन् ?
रियलले तीन खेलाडी भित्र्याउने पक्का ! को–को छन् सूचीमा ?